अक्सर मानिस झुट बोल्छन्, झुट बोलेको यसरी थाहा पाइन्छ !::Hamro Koshi Awaj / awaz
भनिन्छ, सत्य भन्दा झुट मिठो हुन्छ केही समयको लागि । मानिसलाइ झुट बोल्न सजिलो हुन्छ रे । सत्य अलि तितो नै हुन्छ । सत्य कुरा प्रकट गर्न मानिसलाइ अलिक गाह्रो पर्छ ।
किन त ? किन पर्छ त्यस्तो गाह्रो सत्य बोल्न ? किन बोल्छ मानिसहरुले झुटो ?
जो मानिसहरु वर्तमान या क्षणिक समयमा रमाउन चाहन्छ, उसलाई भविश्यको कुनै चिन्ता छैन त्यस्ता मानिसहरु अक्सर झुटो बोल्छन् । कोही मानिसहरु विशेष परिस्थितिबाट उम्कनपनि झुटो बोल्छन् । कोही मानिसहरु कसैलाइ क्षणिक प्रभाव पार्नका लागि झुटो बोल्छन् । यसरी झुटको खेती गरेर मानिसलाइ डुबाउने हरुको त कुरै नगरौं । यहाँ झुटकै भरमा दुनियाँ डुबाउनेहरु कति छन् कति ।
अब झुट बोलेको कसरी थाहा पाउने ? यहाँ केही साधारण उपायहरु प्रस्तुत छ ।
–झुट बोल्नेहरुको आँखाको विचार गर्नुहोस् । उनीहरु झुट बोल्दै गर्दा आँखालाई बडो चनाखो बनाउँछन् । तपाईतिर भन्दापनि यता उता आँखा डुलाउँदै कुरा गर्छन् । किनकी उस्को ध्यान तपाईतिर भन्दापनि बाहिर दुनियाँतिर हुन्छ कतै मेरो कुरा कसैले सुनिरहेको छ कि भन्नेतिर ।
–तपाईसँग कुरा गर्दैगर्दा हातमा मोबाइल या अरु कुनै कुरा खेलाइरहेको छ भने सम्झनुस् ऊ तपाईसँग झुट बोलिरहेको छ ।
–कुरा गर्दै गर्दा शरीरको हाउभाउको विचार गर्नुहोस् । कहिले कपाल मिलाउने, कहिले कपडा मिलाउने अनि च्यापु र ओठको बीचमा दायाँ हातले कन्याइ रहने मानिसहरु झुठो बोलिरहेका हुन्छन् ।
–कहिले सानो स्वरमा अनि कहिले ठूलो स्वरमा कुरा गरे भने त्यो झुठ हुन सक्छ ।
–तपाईसँग कुरा गरिरहँदा दुरी घटबढ गर्ने मानिस झुठो बोलिरहेको हुन सक्छ ।
–कुरा गर्दै गर्दा टेबलमा हात झारेर औंलाहरु चलाउने गरेमा ।
–रोक्किँदै अड्किँदै र कहिले आफैं हाँस्दै कुरा गरेमा ।
–कसैलाइ नभन्ने शर्त गराएमा ।
नङले दाँत कोट्याउँदै कुरा गरेमा ।
–असान्दर्भिक जवाफ दिएमा ।
कहिलेकाहीँ कसैको झुटमा परेर जिन्दगी बरबादपनि हुनसक्छ । त्यसैले झुट हो कि साँचो हो भनेर सामान्य लक्षणहरुको सुक्ष्म अध्ययन गर्नुपर्छ । कसैसँग कुरा गर्दा अलि चनाखो हुनुहोस् । आफ्नो कुरा कम भन्नुहोस् अनि सुन्ने मात्र गर्नुस् । सकभर झुटको पहिचान गर्नुस् ।